Ngaba unqwenela ukubala inani lenkxaso yomntwana? Singakunceda
Umthetho woqhawulo-mtshato » Inkxaso yomntwana
Ngaba wena neqabane lakho langaphambili ninabo abantwana kunye? Ke inkxaso yomntwana yinxalenye ebalulekileyo yezivumelwano zemali ekufuneka zenziwe ngexesha lenkqubo yoqhawulo mtshato. I-alimony yomntwana lixabiso elifakwa ngumzali ongamonganga ekukhathaleleni nasekukhuliseni abantwana.
NGABA UNGUFUNA UKUXHASA UMNYANGO WOKUXHASA UMNTWANA?
> Inqanaba lenkxaso yomntwana
> Kubalwa inkxaso yomntwana
> Ukutshintsha kwenkxaso yomntwana
Inqanaba lenkxaso yomntwana
Ngothethwano, wena neqabane lakho langaphambili linokuvumelana malunga nenani le-alimony yomntwana. Ezi zivumelwano ziya kubekwa phantsi kwisicwangciso sokuba ngumzali. Ukuba awukwazi ukuza kwisivumelwano kunye, elinye igqwetha lethu liya kukuvuyela ukukunceda. Singanceda ngenkqubo yothetha-thethwano, ukufumanisa ubungakanani bomanyomi womntwana kuwe kunye nokuzoba nesicwangciso sokukhulisa umntwana. Siphatha ukumiselwa kwenkxaso yomntwana ngokwenza ukubalwa kwesondlo.
Ijaji ayiyi kujonga kuphela imeko yezemali yomamkeli wenkxaso yomntwana, kodwa nakwimeko yemali ehlawula umntwana i-alimony. Ngokwezi meko zombini, inkundla iya kuthi ke ichonge ubungakanani bomntwana.
Kubalwa inkxaso yomntwana
Ukubala ubalo lolondolozo lubalo oluntsonkothileyo kuba izinto ezininzi kufuneka zithathelwe ingqalelo. Law & More Uya kukuvuyela ukwenza ukubalwa kwesondlo kuwe.
Okokuqala, kufuneka kuqinisekiswe iimfuno zabantwana. Isekwe kwimali engenayo njengoko babenjalo ngaphambi komtshato. Ukuba kukho iindleko ezizodwa, ezinje ngesikolo samanye amazwe okanye ukhathalelo lwabantwana, iindleko zinokunyuswa ngokufanelekileyo.
Nje ukuba iimfuno zabantwana zimiselwe, ukubalwa komthamo wokuthwala umthwalo kwenzelwa omabini amaqela. Olu kubalo lumisela ukuba umntu onoxanduva lokugcina unemali eyaneleyo na ukuze akwazi ukuhlawula isondlo. Ukuchonga ubungakanani bemali yomntu ekufuneka ehlawule i-alimony, kufuneka afumane umvuzo wakhe wokuqala. Ipenshoni yomntwana sisiseko esisisiseko, kuthathelwa ingqalelo yonke imithombo yengeniso, efana nomvuzo, isibonelelo kunye nohlahlo-lwabiwo mali lomntwana.
Umzali ekufuneka ehlawule i-onyony kwaye onxibelelana nabantwana uya kuba neendleko zokugcina abantwana. Oku kubandakanya iindleko zokuthenga, ukuqhuba ubuye umva nangapha. Ngokomgaqo, ipesenti ethile yeendleko ifakiwe kubalo
Isixa sepesenti sixhomekeke kwinani leentsuku zokundwendwela ngeveki. Umzali onomndla wokukhathalela umntwana usuku olunye ngeveki, umzekelo ufumana i-15% isaphulelo sokhathalelo kwaye umzali onakekela umntwana iintsuku ezintathu ngeveki ufumana 35% isaphulelo.
Inyathelo lokugqibela lokubala ukuphakama kwenkxaso yomntwana kukwenza i-equation ethwele umthwalo. Kule nxaki, iindleko zabantwana zahlulwe phakathi kwakho neqabane lakho elongezelelekileyo ngokweendlela zabo zenkxaso. Umthamo womntu onelungelo lesondlo uthelekiswa nomthamo lomntu onoxanduva lokuhlawula isapoti. Emva koko, nasiphi na isaphulelo senkathalo siya kusetyenziswa kwaye sihlengahlengiswe apho kufanelekileyo. Umda wenkxaso ngokuyintloko yenzelwe inkxaso yomntwana. Ukuba kusekho igumbi emva koko, ijaji inokuchonga iqabane lomony.
Ngaba ungathanda ukwazi ukuba imeko yakho yezemali iya kujonga njani emva koqhawulo mtshato? Nceda unxibelelane Law & More kwaye kunye sinokubona ukuba yimalini inkxaso yomntwana ekufuneka uyihlawule okanye uyifumana.
Ukutshintsha kwenkxaso yomntwana
Ukuba akunakho ukutshintsha i-onyony yomntwana ngokubonisana neqabane lakho langaphambili, sinokungenisa isicelo sotshintsho lwakho enkundleni. Singakwenza oku ukuba kukho iimeko eziguqulweyo okanye ukuba, ngokutsho kwakho, inkundla igqibe kwisondlo ngokomyalelo wokuqala ngesiseko esingachanekanga okanye esingaphelelanga.
Ungacinga ngezi meko zilandelayo, umzekelo:
Ukugxothwa okanye ukungaphangeli
• Umsebenzi omtsha okanye owahlukileyo
• Ukutshata kwakhona, ukuhlala ngokuhlala kunye okanye ukungenela ubambiswano olubhalisiweyo
• Utshintsho lwendlela zonxibelelwano